February | 2016 | HimiloNetwork
Zakariya February 29, 2016	Leave a comment 220 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xirfadda qofnimo waa door bulsho. Shaqadu waa howl aalaaba joogto ah laguna howshoodo iyada oo badalkeeda lacag loo qaato. Dad badan waxay kala heystaan shaqooyin u kala gaar ah. Howsha u baahan muruq iyo maskax ayaa lagu magacaabi karaa shaqo. Haddii qofka loo tababaro howl gaar ah waxaa dhacda inay helaan xirfad. Howlaha dhowrka ah ee qofku ...
Maqayaad la yiraahdo: ‘Bixi wixii aad doonto’ oo ku taalla Singapore
Zakariya February 28, 2016	Leave a comment 159 Views
Singapore (Himilonews) – Marka qofku gaajada dareemo, meesha ugu fudud ee uu ka heli karo cunnno uu ku haqabeelo ayuu abbaaraa isaga oo hadba ku tashanaya wixii jeebkiisa ku jira ama lacagta uu sito inta ay la egtahay. Haddayse qofku ku adkaato in lacag uu wax ku cuno waayo, wuxuu ugu yaraan gaajadiisa–hadduusan dawarsi iyo boob wax ku dayin. Balse ...
Zakariya February 28, 2016	Leave a comment 356 Views
Hargeisa, Somaliland (Himilonews) – Sidaynu wada ogsoonahay umaduhu waxay leeyihiin Raad-taariikheed oo laga dheehan karo waayihii soo maray. Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa, isbaddaladdii kala duwanaa ee umadda Soomaalida soo maray qarnigii tagay.aniga oon soo wada bandhigeyn, laakiin dul marayaa. markii ay midoobeen labadii gobol ee koonfur iyo waqooyi, oo ay heleen xorriyad ku sheegtii ay badiba qaateen wadamadii Afriki, ...
Zakariya February 28, 2016	Leave a comment 248 Views
New Delhi, India (Himilonews) – Xaafado dhowr ah oo galbeedka Hindiya kamid ah ayaa gabdhaha iyo haweenka aan la guursan ka mamnuucaya qaadashada ama isticmaalka mobillada iyaga oo sheegaya in tilifoonku uu hakad ka galinayo waxbarashadooda. Xaafadaha Mehsana iyo Banaskantha ee gobolka Gujurat ayaa tallaabadan ku dhawaaqay waxaana durba ol’olaha kusoo kordhay xaafada kale oo badan, sida uu yiri Ranjit Singh Thakor ...
Zakariya February 28, 2016	Leave a comment 229 Views
Paris, France (Himilonews) – Lafaha dad noolaa casrigii dhexe oo ku jira godad jihadoodu ku tusmeysan tahay Makka ayaa laga helay gudaha Faransiiska. Cilmi-baaris hidde-gal ah ayaa muujisay in saddexdan nin ay ab-ogaa ku ahaayeen waqooyiga Afrika, sida warsidaha Academic uu qoray. Radio-carbon dating lagu sameeyey ayaa tilmaantay in lafaha meydadkani ay ka yimaadeen sida fog ee ugu dheer ee ...
Zakariya February 27, 2016	Leave a comment 178 Views
Dubai, UAE (Himilonews) – Haweeney ayaa loo xukumay fal-danbiyeed ah inay ubadkeeda dhawaan-dhaladka ku ahaa ay gudaafad qashin ku xoortay si uu u dhinto maadaama aysan rabin, sida ay sheegtay, inay korsato, sida ay sheegeen bileyska Imaaraatka Carabta. Hadda haweeneyda 31-jiradda ah oo magaceeda lagu soo koobay S.S. ee Dubai, waxaa lagu xukumay xabsi daa’in ah inay sabab u aheyd ...
Zakariya February 27, 2016	Leave a comment 217 Views
Brazil (Himilonews) – Dab damisley ayaa loogu yeeray inay xabisaan Daanyeer kadib markii dad dhowr ah oo ku sugnaa baar uu kusoo weeraray mindiyo, sida ay sheegeen bileyska Brazil. Waaxda dab damiska ee Patos ayaa sheegay in looga yeeray baarka maalinkii Jimcaha si ay hubka uga dhigaan Daanyeer careysnaa oo dadka ku eryanayey mindiyaha jikada. Marka loo eego baaritaanka bileyska, ...
Zakariya February 27, 2016	Leave a comment 276 Views
Muqdisho (Himilonews) –Wadaagista dano iyo dareen qoto dheer oo lagu ilaashado dhul jugraafi ahaan ay u wada leeyihiin ummad ka mideysan aragti, iimaan ama dhalasho ayaa lagu magacaabaa qaranimo. Wadaniyadduna waa midda ku xoojisa qaranimada in loo dhinto ugu badnaan: loo dhaawacmo ugu yaraan—lagana dhiilloodo wax-yeelisteeda. Qaranimadu waa mid kamid ah asbaabihii sababay dagaalladii koobaad iyo labaad—halkaas oo wax ka ...
Zakariya February 23, 2016	Leave a comment 249 Views
Muqdisho (Himilonews) – Horumarka la sheego gebigiis wuxuu ku saleysmaa sida ay u wada fal-galaan saddex siyaabood oo kala ah tirada dadka, dhulka iyo waqtiga la heysto. Sida saddexdaas la iskugu geeyo ayuu ku saleysmaa horumarka la sheego gebi ahaantiis. Bilowga kacaankii warshadaha ee Yurub ka beekhaamay qarnigii 18aad, waxaa ku wajahnaa labo caqabad oo kala ah helidda kheyraad ay warshadeystaan ...
Zakariya February 22, 2016	Leave a comment 288 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nin ayaa lagu qaaday danbi ah inuu si ula kac ah u dilay saaxiibtiis kadib markii uu ka hinaasay niman badan oo ay la hadli jirtay, sida laga soo xigtay bileyska Hindiya. Bileyska Dehradun ayaa sheegay in 27-jirka Ashish Kumar uu sawir la galay saaxiibtiis kahor inta uusan dilin. Kadib dilista Gurpreet Kaur, oo 30-jir aheyd, Kumar ayaa dhex galay ...